Pep Guardiola oo aragtidiisa ka dhiibtay kulanka ay habeen dambe wajahayaan kooxda Real Madrid – Gool FM
Van de Beek oo shaaca ka qaaday sababta ka dambeysay inuu ku dhiirado heshiiskii uu ugu biiray kooxda Man United
Danilo oo ammaanay saaxiibkiis Cristiano Ronaldo, muxuuse ka yiri Andrea Pirlo??
(Manchester) 06 Agoosto 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa carabka ku adkeeyay dhibaatada kaga imaan karta kubad xakameynta naadiga Real Madrid, sababa la xiriira inay heysato xalal badan.
Hadalka macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ayaa wuxuu yimid kahor kulanka ay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Etihad, kaasoo qeyb ka ah kulamada harsan lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Manchester City ayaa guul ku soo gaartay 1-2 kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu, waxayna Sky Blue u baahan tahay in kulanka haben dambe ay guul ku gaarto natiijo kasta, barbardhac, ama inay ku guuldarreysato 0-1.
Haddaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Pep Guardiola kahor kulanka habeen dambe, wuxuuna yiri:
“Xakameynta Real Madrid? Mararka qaar waxaad isku daydaa inaad iyaga ka xakameyso hal dhinac, balse waxay kaaga soo baxayaan dhinaca kale, ama dhanka kale, marka way adag tahay in la falanqeeyo wax qabadkooda, sababtoo ah aad ayey u fiican yihiin”.
Intaas kaddib Pep Guardiola ayaa wuxuu ammaanay wax qabadka weeraryahanka reer France ee Karim Benzema oo loo arko inuu yahay ciyaaryahanka ugu halista badan safka kooxda Real Madrid.
Macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa yiri:
“Waa ciyaaryahan wanaagsan, markii uu joogay Lyon wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, sidoo kale Real Madrid mudada 10-kii sano uu joogay, tan iyo markii aan joogay Barcelona”.